Copy/Paste » ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်	50
ယခင် သတင်းမှတ်တမ်း www.youtube.com မိုးပြာဆိုသည်မှာ www.4shared.com About mgmaung
View all posts by mgmaung →	Blog
kai says: ကိုဇာဂနာ.. ခဏခဏပြောတဲ့.. မြစ်ကြီးနားထောင်ထဲက.. ဆရာတော် ဦးဉာဏဆိုတာ.. ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်လားလို့ သိချင်ပါတယ်..။
mgmaung says: ကိုဇာဂနာ.. ခဏခဏပြောတဲ့.. မြစ်ကြီးနားထောင်ထဲက.. ဆရာတော် ဦးဉာဏဆိုတာ.. ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ရှင်ဉာဏပဲဖြစ်ပါတယ် kai/
kai says: နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု လိုအပ်
mgmaung says: မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်နဲ့ အတူနေခဲ့ရသော ဆရာတော် ၀ီရသူမှ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ရှင်ဥာဏနဲ့ ထေရ၀ါဒမှ သံဃာတချို့ကိုလည်း လွှတ်ပေးသင့်ကြောင်း RFA သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်ဟု ကြားသိရပါတယ်/
ကိုပါကြီး says: မိုးပြာဆရာတော် ရှင်ဥာဏကို အကျဉ်းချထာလေလေ မဟနအဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းလေလေ။
kai says: ကျုပ်စိတ်ထဲ.. ဘ၀င်မကျတာ တခုရှိတယ်..။
တရားတာကိုချစ်ရင်.. … တရားတဲ့ဖက်က ရပ်တည်ပေးကြ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 10299
windtalker says: သဂျီး က သဂျီး ပါဘဲ
kai says: တခါက ဒီဃဘာဏက အဘယဆိုသော မထေရ်ကြီးတပါးသည် ပိဏ္ဍပါတ်ဓုတင်ဆောင် ရဟန်းတပါးကို ပုထုဇဉ်လော ရဟန္တာလောဟု မခွဲခြားမဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ သူငယ်တယောက်အား အမှတ်သညာပေးထား၏။ ထိုသူငယ်သည် ကလျာဏီမြစ်ဆိပ်၌ ငုပ်၍ ရေချိုးနေသော ထိုရဟန်း၏ ခြေထောက်ကို ဆွဲလေ၏။ ပိဏ္ဍပတ်ဓုတင်ဆောင် ရဟန်းသည် မိကျောင်းမှတ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ်လေရာ ပုထုဇဉ်မှန်းသိရလေ၏။ မှန်ပါသည်။ ရဟန္တာမည်သည် ဦးထိပ်၌ မိုးကြိုးကျသော်လည်း ကြောက်တုန်လှုပ်ခြင်း မဖြစ်တော့ပါ။ အသက်ခန္ဓာ၌ တပ်မက်ခြင်း နိကန္တိကို ပယ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကြောင်ကြီး says: မတူသော အတွေးနဲ့ မြင်ကြည့်မယ်ဗျာ။ ကြောက်လန့်တကြားအော်လို့ ရဟန္တာ မဟုတ်တာ လက်ခံပါတယ်။ အနာဂါမ်အဆင့်အထိ မရောက်သေးတာလည်း လက်ခံတယ်။ သို့ပေမဲ့ အောက်နှစ်ဆင့် အရိယာဖြစ်နေရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဘဇာကြောင့် ပုထုဇဉ်လုံးလုံးလျားလျား ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်သလဲ။ အနာဂါမ်ဆိုရင် ဒေါသကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်လို့ ကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူး၊ ရဟန္တာကတော့ ကိလေသာအားလုံး ပယ်သတ်ပြီးသွားလို့ ပြောစရာမရှိဘူး။
Was this answer helpful?LikeDislike 74
ကိုသစ္စာ says: ထေရ၀ါဒရဲ့ ပရမတ္တသစ္စာက ပုံဖော်ထားတဲ့ ရဟန္တာနဲ့ အရိယသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်အရ ဆိုလိုတဲ့ ရဟန္တာ အခြေခံတရား သစ္စာမတူတာမို့ တူနိုင်ပါ့မလား။
ယနေ့ မြန်မာထေရ၀ါဒသည် ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏ ပရမတ္တသစ္စာအယူကို အဓိကထားတဲ့ သီဟိုဠ်ခေတ်က စာရေးဆရာဘုန်းကြီးတွေ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးခဲ့တဲ့ ကျမ်းတွေကို အဓိကထားဖွင့်ဆိုခြင်းကြောင့် ဂျိန်းဘုန်းကြီးဆန်ဆန်ဖြစ်နေတာကို ရဟန္တာလို့ ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဦးဥာဏက.. သူ့ကိုယ်သူ.. အရိယာပါလို့ နိုင်ငံသိကြေငြာတာခဲ့တာကို ထေရ၀ါဒီ သီဟိုဠ်နောက်လိုက် ပရမတ္တသစ္စာသမားတွေ ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အရိယာဆိုတာကြီးနဲ့ စစ်ဆေးရင်တော့ လွဲပြီပေါ့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 74
ကိုသစ္စာ says: (အခုဟာက.. မဟနထဲက.. တပါးမှ.. အရိယာလို့ဝန်ခံထားတာမရှိပဲ.. (တချို့ဆို.. အရိယာမဟုတ်ပါဘူးတောင် ပြောထားကြတာ) သူတို့က.. အရိယာတရားဝင်ကြေညာရဲသူကို.. အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်း.. ဖမ်းထောင်ချတာကြီးက.. တမျိုးကြီးပဲ..။ ) ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သီဟနာထ စာတမ်း http://dc309.4shared.com/download/NtywVFrS/Sihanahta.pdf?tsid=20111229-111556-409421ef လေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
nyanakyaw says: မဟန လုပ်ရပ်မမှန်မှုတွေကတော့ များစွာတွေ့ရပါတယ်။ မဟန ဦးဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ ၀ိနိစ္ဆယ ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်လည်း စောဒက(တရားလို)၊ စုဒိတက(တရားပြိုင်)၊ ၀ိနည်းဓိုရ်(တရားသူကြီး) နှင့် မဟန(၄၇)မှ သံဃာများ စုံလင်စွာပါဝင်ပြီး တရားလိုတင်ပြသည်ကို တရားပြိုင်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြ၊ ၀ိနည်းဓိုရ်မှ ပြန်လည်မေးမြန်းပြောဆို ဆုံးမရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း စုဒိတကအမြင်နှင့် စောဒက အမြင် မတူလျှင် ညှိနှိုင်းမရပါဘူး။
အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ says: အသုတ်လိုက်လွှတ်မယ်လို့ ပြောနေသံ ကြားတယ်။ ဟုတ်သလား။
ကိုသစ္စာ says: ဒီ အာဏာရှင် (၄၇)ပါးရဲ့အလိုကျက အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာပဲ ရမှာပဲ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 75
ဂျက်ကီချီးပေ says: ခင်ဗျားတို့ ဘုန်းကြီးတွေ ကိစ္စ ဘုန်းကြီးတွေကို သွားပြောကြ
ashinariya says: ဘုန်းကြီးတွေ ကိစ္စကို ဒီမဟနဘုန်ကြီးတွေက ယခင်လူအာဏာရှင်အစိုးရကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အသုံးချခဲ့လို့ ပြောနေရခြင်းဖြစ်၏။
ဂျက်ကီချီးပေ says: ဘုန်းတော်ကြီးအချင်းချင်းတောင်ပြောလို့မရတာ
mggwa says: (ဒီဘဝကိုယ်က ကျေအေးပေးလိုက်တော့
Was this answer helpful?LikeDislike 75
ဂျက်ကီချီးပေ says: ဟာ!!!!!!!!!!!ဆရာကြီး
ကြောင်ကြီး says: ကြောက်ချာဂျီးပါလား မောင်ကြက်ဂီချိစ်ပေရဲ့…။ အယူတိမ်း နတ်စိမ်းဖြစ်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးထင်ပါ့။ မသေခင်က သဂျီးကို ထမီလှန်ပြရဲမှတော့ သရဲဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်သူကိုမှ မကြောက်တော့ဘူးပေါ့။ ရွာထဲမှာလည်း အဲသလို ပေါက်ပေါက် မြောက်မြောက် စိတ်ထင်ရာ ပြောနေတဲ့ အရိယာသစ္စာရှင်ဆိုသူများ ရှိနေလေရဲ့။ သူတို့သေလို့ သရဲအရိယာပါဆိုပြီး လိုက်ခြောက်နေရင် ဒုက္ခောပဲ…။
Was this answer helpful?LikeDislike 5
Sai Mya Too Gyar says: သံဃာတော်တွေဟာ သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပါ။ မဟနမှာ ထေရ်ကြီး ဝါကြီးတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်ကို ဂုဏ်သိက်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်နားစွန်နားဖျားကြားပြီး အကြောင်းရင်းမသိပဲနဲ့ မပြောကြပါနဲ့။ မဝေဖန်ကြပါနဲ့။ ငရဲကြီးကြမှာ စိုးလို့ တားပါတယ်။ ကျမ်းဂန်မှာ တတ်သိကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို အနည်းငယ်လောက်သိတာကို ဘာဘာညာညာနဲ့ ပြောပြီး ပြစ်မှားရင် ပေတကထာမှာ ပါမှာ စိုးလို့ တားပါတယ်။ နားလည်ကြပါ။
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒီပိုစ့်ကို ၀င်မပြောထိုက်ဘူးထင်လို့ ထားတာ….
mggwa says: “နေ၀င်းကလုပ်ခိုင်းလို့ စိန်လွင်က လုပ်ထားတဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့” ဆိုတာ တကယ်မို့ နောက်လူတွေ တကယ်ထင်ကုန်တာဘာဆန်းလဲ ပါလေရာရဲ့၊
kai says: လင့်ခ်နဲ့ စာအုပ်တချို့ .. သိသူများ.. ညွှန်းပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား..။
ဦးဦးပါလေရာ says: “.လွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်း.. ထောင်ချထားတာကို အဓိကထားပြောရတာပါ..။ မတရားတာကို.. မတရားဘူးလို့ ပြောနေတာပါနော….။”
လောလောဆယ်တော့ သူကြီးပြောသလိုပဲထားပါတော့ ။ နဲနဲပြန်မွှေပြီးမှ စကားပြင်မယ်။ အဲဒီမတရားမှု့က ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကစတဲ့ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ရဲ့မတရားမှု့ပါ။
ဒါပေမယ့် မဟန ကြောင့် ကောင်းသွားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါ့ထက်အရေးကြီးတာက မဟနကို အစားထိုးနိုင်တဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့ကြီးတခုမရှိလာခင် မဟန ဆက်ရှိနေဘို့တော့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဗွက်ပေါက်သွားမှာ။ မဟနဟာ မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒကို ဆွဲစည်းထားတဲ့ လျော့ရဲရဲကြိုးတချောင်းလို့ ကျွန်တော်မြင်ကြည့်ပါတယ်။ မဟနက ရဲရဲတင်းတင်း အစိုးရလောင်းရိပ်အောက်က ရုန်းထွက်ဘို့က ပိုလက်တွေ့ကျပါတယ်။ အချိန်မီမရုန်းထွက်ရင် သမိုင်းဆိုးပါတော့မယ်။
ဇွဲမာန်(အင်းဝ) says: ဘုန်းကြီးကိစ္စ ဘုန်းကြီးတွေလုပ်တာပဲကောင်းပါတယ်၊ တကယ်တရားစစ်တရာမှန်သိချင်တယ်ဆိုရင်
we ren thu says: ဘာသာေ၇း ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ ဘယ်လို ယုံကြည်ချက်လဲ အ၇င် ကြည့်ဖို့ လိုတယ်လေ =—
ကိုသစ္စာ says: ဂျိန်းအယူလွှမ်းနေတဲ့ ရိုးရာထေရ၀ါဒအသိအမြင်နဲ့ကတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာနဲ့ အဝေးကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲ။
we ren thu says: အရိယာရဲ့တန်ဘိုးအမှန်ကို မသိပဲ အရိယာပြောသမျှ ဘာပြောပြော အပြစ်မြင်ကန့်လန့်တိုက်နေတော့ ဘယ်မှာလာပြီး အရိယာသစ္စာတရားကို သိနိုင်တော့မှာလဲ၊ အဲဒါကိုက မဂ်တား၊ ဖိုလ်တားဖြစ်နေတာပါ။——–ဟုတ်တာပေါ့ မိုးပြာဘာသာဝင်တွေက အ၇ိယာ ၇ူး ၇ူးနေမှတော့ မိုးပြာပြောတဲ့ အ၇ိယာနဲ့ဘု၇ားပြောတဲ့အ၇ိယာ လွဲပြီပေါ့
we ren thu says: ဦးဥာဏက စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါလို့ မြန်မာလို ခေါ်ကြတဲ့ schizophrenia ဝေဒနာစုထဲက paranoid schizophrenia စိတ်ဝေဒနာကို ခံစားနေရတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ထဲက ဖန်ဆင်းထားပြီး ဒါတွေကို တကယ်အဟုတ်အမှန် ဖြစ်ခဲ့လေဟန် ဖြစ်နေလေဟန်နဲ့ ပြောတတ်တယ်။ စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေ၊ ထူးဆန်း မော်ဒန်ဘာသာရေးဂိုဏ်းထောင်ပြီး နောက်လိုက်တွေကို ဂွတီးဂွကျ နေထိုင်နည်းတွေ ညွှန်ကြားတတ်တဲ့ အနောက်တိုင်း ဘိုးတော်တွေထဲမှာလဲ ဒီဝေဒနာသည်တွေ တွေ့ရတတ်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ဂြိုဟ်မွှေသွားတဲ့ နာဇီအာဏာရှင်ကြီး အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာလဲ ဒီရောဂါမျိုး ခံစားခဲ့ရပုံ ပေါ်တယ်။
၂-အုပ်စုက သူ့ရဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား hallucination တွေကို သူ့ဟာသူ တကယ်ထင်သွားတာမျိုး။ ၁-အုပ်စုကနေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ အနည်းနဲ့အများ ၂- အုပ်စုထဲ ရောက်သွားတတ်တယ်။ သူ လိမ်နေရတာတွေကို သူ့ဟာသူ ကြာတော့ အမှန်ထင်ပစ်လိုက်တာ။ ထင်သွားတာ။ ဦးဥာဏက ၁ အုပ်စုဝင် အဖြစ်နဲ့ သူ့စိတ်ဝေဒနာကို အစပျိုးခဲ့တာလို့ ကောက်ချက်ဆွဲမိတယ်။ အဲဒီအချိန်က သူ့ကို အနီးကပ် ဆက်ဆံဖူးခဲ့၇င်တော့ အဲဒီကတည်းက သူဟာ ကိုယ်လိမ်တာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ယုံနေတဲ့ ၂ အုပ်စုဝင် ဖြစ်ပြီလား မဖြစ်သေးဘူးလား ဆန်းစစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
ကိုသစ္စာ says: ထပ်ဆင့်ပြီး အကြံပေးလိုတာက ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်အပေါ် we ren thu ထင်မြင်စွပ်စွဲချက်များဟာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။
AYAN KHA says: ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်….. schizophrenia ဝေဒနာစုထဲက paranoid schizophrenia စိတ်ဝေဒနာကို ခံစားနေရသူဟာ အထက်ပါ Comment အရကြည့်မယ်ဆိုရင် We Ren Thu ဆိုသူထံမှ အဲ့ဒီရောဂါ လက္ခဏာဖြစ်နေပြီနဲ့တူပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး…… “အော်————ဟအော်ဟအော်ဟအော်=====” နဲ့
we ren thu says: နောက်ပြောင်တာဆိုရင်လည်း….. လူကြီးတွေစကားကောင်းပြောနေတုန်း ပဲကြီးလှော်ဝင်ဝင် မနှိုက်သင့်ဘူး ကလေးရဲ့ မင်းသိရဲ့လား…တဲ့…–ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးဘိုးေ၇ —-ဘိုးဘိုးတို့ ပဲ မ၇ှိတဲ့ သွားနဲ့ပဲလှော်ဝါးကြပေါ့ —-နောက် အဲ့ဒီ ကြာ-ပေါ-ကြီး-ကြောင်(ကြာလေပေါလေ ကြီးလေ ကြောင်လေ)ဘ၀မှာပဲ မိုးပြာမိုးပြာနဲ့ အော်ပြီး အ၇ိုးထုတ်ကြတော့နော်–ကြည့်၇တာ သူလည်း အဲ့ဒီေ၇ာဂါ၇ှင်ပဲထင်တယ်–သူ့ ကလေး သေသွားလို့ gazette မှာ လာဝင်သောင်းကျန်း နေလားမသိ—–(မိုးပြာ S.၇ူးများနှင့် နောက်ထပ်ဆွေးနွေး၇န် မ၇ှိတော့ပါ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထို သကောင့်သားတို့သည် –ကိုယ်နိုင်သည့်ဘက်ကပဲ ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်ကြပြီး လူ့ အခွင့်အေ၇း လွတါလပ်စွာယုံကြည်ပိုင်ခွင့် အစ၇ှိသော စကားလုံးများကိုေ၇ပက်မ၀င်အောင် ပြောဆိုပြီးသကာလ–အလွန်အောက်တန်းကျသော အယူဝါဒများကို ဘု၇ားဟောယောင်ယောင် အော်ကြေသည်မှာ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်ဟူသော အဆိုအတိုင်းပင်ဖြစ်နေပါသည် –သူတို့ ၏ အခြေခံ ငါးပါးသီလကိုပင် ပြန်လည် မခြေပနိုင်ပဲ———–
True Answer says: မဟန ၏ မမျှတမှု က သတ်သတ်
အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ၊ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ၊ သီရိပျံချီ KING says: ပါရမီ (၁၀)ပါးမှ
mggwa says: ဥကို မပစ်ခါနဲ့လေ၊ သီယိ ပြန်ဂျီကြီးရဲ့၊
we ren thu says: “windtalker ကို စေတနာနဲ့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ၊ အပွေးမြင်ရင် အပင်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးမှာပါ၊ ပြောကြဆိုကြတဲ့ စကားတွေဆိုတာ ကိုယ့်အပင်က အပွေးတွေဆိုတာကိုတော့ သတိရပါ။ လူချင်းမမြင်ရလို့ ကိုယ်ရေးချင်တာရေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ လူတွေက နားလည်သွားကြလိမ့်မယ်???”
ကိုသစ္စာ says: နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသိစေရန် အထက်ပါပို့စ်အား 27-1-2012 ရက်နေ့က talk to DVB လွှင့်ထုတ်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
True Answer says:ုမြတ်စွာ ဘုရား က အနတ္တ (ငါ မဟုတ်) ဟောတယ်။
လှည့်ဖြားမှု ၊ ကောက်ကျစ်မှုပင်ဖြစ်လေသည်။ လှည့်ဖြားမှု၊ ကောက်ကျစ်သူများအတွက် တူသော အကျိုးပေးများ ရှိနေတတ်ကို နားလည်လျှက်
ကိုသစ္စာ says: ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာအမှန်ကို သိအောင်ဖော်ထုတ်နေတာနှင့် မကျေနပ်ဖြင့် ဟိုရေးဒီရေးဆိုတာ တခြားစီပါ။
ကိုပါကြီး says: ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ဟာမှ ဘုရားဟော သူ့ဟာဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးဟု အငြင်းပွားခြင်းသည် ဥပဒေသဘောမျိုးနှင့်ပြောရမည်ဆိုပါက တရားမမှု သဘောမျှသာဖြစ်ပေသည်။ ထေရဝါဒအယူနဲ့ ဖွင့်ဆိုပုံမတူတာနှင့်ပဲ ထေရဝါဒကို ထိခိုက်သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခိုင်း ထောင်ချခိုင်းခြင်းမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပေ။
we ren thu says: နိုင်ငံတော်ကတော့ ဒီမိုကရေစီကိုဦးတည်သွားနေတယ်/
ကိုသစ္စာ says: we ren thu အနေနဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် သီလနှင့် ပတ်သက်သော တရားများကို သေသေချာချာ အောက်ပါ လင့်များတွင် လေ့လာကြည့်ပါက မိမိနာလည်မှုလွဲမှားနေသည်ကို သိရပါလိမ့်မည်။
True Answer says: we ren thu says:
ကိုသစ္စာ says: True Answer အနေနဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် တရားများကို သေသေချာချာ အောက်ပါ လင့်များတွင် လေ့လာကြည့်ပါက မိမိနာလည်မှုလွဲမှားနေသည်ကို သိရပါလိမ့်မည်။
“သီလကို ပညာနဲ့ ဆေးကြောပါ တရား” (http://www.mediafire.com/?9avbgh0dt1q9oi1#1) အလယ်လမ်း ငါးပါးသီလ တရား (http://www.mediafire.com/?eg7psva68b6g3z4#1) နှင့်
nyanakyaw says: အခြားသူကို ကိလေသာ မကုန်သေးဘူး၊ ငါးပါးသီလ မလုံးဘူးလို့ ပြောမနေကြပါနဲ့တော့ဗျာ၊ အဲဒီလို ပြောနေ၊ ရေးနေတဲ့အချိန်မှာ ရေးနေ ပြောနေကြသူတွေမှာရော ကိလေသာကုန်ပြီး၊ ငါးပါးသီလ လုံကြပါရဲ့လား။ ပြန်စစ်သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဦးဥာဏ လုပ်ရပ်တွေကို အပြစ်လို့မြင်ရင် သူ့လိုကိုယ်မှာ မဖြစ်အောင်နေထိုင် ကျင့်သုံးကြပါ။
ရဲစည် says: ရှင်းရှင်းလေးရယ် …. တရားဆိုတာ ကိုယ်အတွက်အရင် ကျင့်ကြံရတယ်။ပြီးမှ ကျန်တာဆက်လုပ်…..အခုလည်းဒီလိုဘဲ….တရားစစ်တရားမှန်ရထားပြီးရင် ထောင်ထဲကျင့်ကျင့် တောထဲကျင့်ကျင့် ဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ဘုန်းကြီးသူ့အလုပ် သူအရင်လုပ်ပါစေ။ရှေးက ဆရာတော်ကြီးများ သူတို့အသက်မကုန်ခင် ဘာမှမရမှာဆိုးလို့ စကားတောင်အပြောမခံဘူး အချိန်လုနေရတာ။ကိုယ်လည်းဘဲ ယုံကြည်တာကို ရအောင်အရင်လုပ် သိပ်စကားများကြနဲ့။အချိန်တွေသိပ်ပိုနေရင်၊တရားထူးတရားမြတ်တွေ ပေါက်မြောက်နေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး………….
True Answer says: ဦးဦးပါလေရာ says:
ကိုပါကြီး says: True Answer ၏ ရေးသားမှုများသည် တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်နေလို့ ၀င်ပါလိုက်ပါ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မြန်မာပြည်ကထေရ၀ါဒတစ်ခုတည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်။
mgmaung says: ထေရ၀ါဒီအာဏာရှင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ တရားများရဲ့မှန်ကန်မှုကို ကိုယ်တိုင် မယုံရဲသေးပါသဖြင့် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်အား မလွှတ်ပေးဖို့ အာဏာပိုင်တွေအား ကန့်ကွက်ထားနေပါတယ်။